सिंगापुरलाई हराउँदै उपाधि जित्ने दाउमा नेपाल ! | Hamro Khelkud
सिंगापुरलाई हराउँदै उपाधि जित्ने दाउमा नेपाल !
काठमाडौँ – मलेसियामा जारी आईसीसी विश्वकप टी–२० एसिया क्षेत्र छनोट ‘बी’ को को छैटौ तथा अन्तिम खेलमा नेपालले शुक्रबार (भोली) सिंगापुरसँग खेल्नेछ ।
खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो १२ :१५ बाट मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा सूरु हुने छ । उपाधिको एक्लो दाबेदारको रुपमा हेरिएको नेपालको नजर सिंगापुरलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि चुम्ने नै हुने छ । दुबै टोलीले समान ५ खेलमा समान ५ मा जित निकालेका छन् ।
अंकतालिकामा नेपाल नेट रन रेटका आधारमा पहिलो र सिंगापुर दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । जारी प्रतियोगितामा नेपाललाई अलि टक्कर दिन सक्ने टोली सिंगापुरनै हो । तर नेपाल भन्दा कमजोर हो । पछिल्लो समय डिभिजन ४ को फ्रम्यार्टको क्रिकेट खेली रहेको सिंगापुर र वान डे मान्यता पाएको नेपालको खेल स्तर आकाश पातलको फरक रहेको पाइन्छ । सिंगापुरले पनि अघिल्लो चरण पक्का गर्दा भुटान र थाईल्यान्ड मध्य एक टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तो छ नेपाल र सिंगापुरको हेड टु हेड
नेपालले सिंगापुरसँग कुनै पनि फ्रम्यार्टको क्रिकेटमा अहिले सम्म पराजय भोगेको छैन । टी–२० क्रिकेटमा नेपाल र सिंगापुरबीच २ ओटा खेल भएका छन् । दुबै खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । टी–२० क्रिकेटमा नेपालले बनाएको सर्वाधिक स्कोरको रेकर्डपनि सिंगापुरबीरुद्ध नै रहेको छ । सन् २०१३ मा कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा भएको एसीसी कपमा सिंगापुरबीरुद्ध बनाएको २ सय १० रन नै नेपालले टी–२० मा बनाएको उच्च रन हो । उक्त खेलमा नेपाल १ सय २१ रनले विजयी भएको थियो ।
जारी प्रतियोगितामा नेपालले ५ खेलमा ५ मा नै फराकिलो अन्तरको जित निकालेको छ । म्यानमार र मलेसियालाई ८ विकेटले पराजित गरेको नेपालले थाइल्यान्डलाई १ सय ४० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै भुटानलाई १ सय १७ र चीनलाई १० विकेटले पराजित गरेको नेपालले उपाधि जित्ने निश्चित जस्तै छ । बलिङमा हाबी भई राखेको नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसारको ब्याटिङ गर्न भने सकिरहेको छैन ।